IMartech ngoku iyafumaneka kwiiGoogle zangoku | Martech Zone
IMartech ngoku iyafumaneka kwiiGoogle zangoku
NgoMvulo, nge-12 kaDisemba ngo-2011 NgoLwesine, Julayi 20, 2017 Douglas Karr
Ukuba unayo i-Smartphone okanye iThebhulethi, ukujonga iiwebhusayithi kunokuba nzima. UGoogle uza kuhlangula nge I-Google yangoku.
I-Google Currents yiGoogle Reader kwii-steroids, nokuba ivumele abapapashi ukuba bandise umxholo wabo kwaye bayicwangcise basebenzise uMvelisi wabo weGoogle Currents.
Qiniseka ukuba ubhalisele IMartech kwiGoogle yangoku. Siwahlule onke amacandelo ethu, inkqubo yethu kanomathotholo, iividiyo nkqu nezethu Umxholo kuGoogle +!
tags: imisingaimisinga yeGoogleGoogle +iPadiphoneipilisi
Iziqendwana, i-SEO kunye neZiphumo zeShishini
Ukufika kweWordPress 3.3